मोतिविन्दु भनेको के हो? – NUBRI LANGUAGE PROJECT );
तपाँईको आँखा भित्र एउटा लेन्स हुन्छ। यो लेन्सले क्यामाराको लेन्सको जस्तै प्रकाशको किरणलाई केन्द्रित गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दा तपाँई देख्न सक्नु हुन्छ। यो लेन्स, तपाँई जवान हुदा पारदर्शी र रङवबिहिन हुन्छ, तर जब तपाँई बुढो हुदै जानुहुन्छ, यो लेन्स धमिलो र पहेँलो हुदै जान्छ। तपाँईको लेन्सको धमिलोपनलाई मोतिविन्दु भनिन्छ। समय बित्दै जादा, मोतिविन्दुले तपाँईको दृष्टी अझ धमिलो बनाउछ, र तपाँईको आँखा प्रकाशको ज्योतिसंग संवेदनशील हुदै जान्छ।
कस्लाई मोतिविन्दु हुन्छ?
मोतिविन्दु उमेर बढ्दै जादा हुन सक्ने एउटा सामान्य अवस्था हो, त्यसैले जब उमेर बढ्दै जान्छ, यो समस्या सबैमा देखिन्छ। तर अरु कारणहरुले गर्दा, यो समस्या सानो उमेरमा पनि देखिन सक्छ।
मैले कहिले मोतिविन्दुको शल्यक्रिया गर्नु पर्दछ?
मोतिविन्दु आफैमा तपाँईको आँखाकोलागि हानिकारक हुदैन। त्यसैले जब यसले तपाँईको दृष्टीलाई असर गर्छ, त्यसपछि मात्र यसको शल्यक्रिया गर्दा राम्रो हुन्छ।
मोतिविन्दुको शल्यक्रियामा के के सामेल हुन्छ?
मोतिविन्दुको शल्यक्रियामा तपाँईको धमिलो लेन्सलाई हटाएर, त्यसको ठाऊँमा एउटा कृतिम लेन्स राखिन्छ। यो प्रक्रिया “लोकल आनसथेटिकको” प्रभावमा गरिन्छ, जसले गर्दा तपाँई बिउझैं भए पनि, तपाँईले आफ्नो आँखामा कुनै दुखाईको महसुस गर्नु हुनेछैन। शल्यक्रिया भईरहदा तपाँईले राम्रोसंग देख्न सक्नु हुदैन, तर तपाँईले चहकिला प्रकाशका किरण र रंगहरु देख्नुहुनेछ।यो प्रक्रिया हुदा, तपाँई नचलिकन पल्टनु पर्नेछ — यदि तपाँईलाई खोक्नु परेमा अथवा आफ्नो सुताईको आसन परिवर्तन गर्नु परेमा, कृपया डाक्टरलाई पहिला सचेत गराउनु होला। यो शल्यक्रिया पुरा हुन लगभग आधा घण्टा लाग्छ। आँखाको साईडमा साना चिराहरु पारेर मोतिविन्दुलाई हटाईन्छ, र त्यस्को ठाऊँमा एउटा कृतिम लेन्स राखिन्छ। यो लेन्स प्लास्टिबाट बनाईएको हुन्छ, र यो तपाँईको आँखामा सधै रहन्छ। हरेक बिरामीको लागि उचितहुने लेन्स छान्नको लागि शल्यक्रिया अगाडि नै बिरामीको लेन्सको नाप लिनुपर्छ।
किन मैले मोतिविन्दुको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ?
मोतिविन्दुको शल्यक्रियाले तपाँईको दृष्टीमा सुधार ल्याउने काम गर्छ। मोतिविन्दुलाई हटाउनासाथ, तपाँईले राम्रो संग देख्नु पर्छ, र साथै तपाँईको रंगहरुलाई छुट्टाउन सक्ने खुबिमा पनि सुधार आउनसक्छ।
यसमा के कस्ता जोखिमहरु छन्?
मोतिविन्दुको शल्यक्रिया प्रायःजसो धेरै नै सफल हुन्छ। १०० जनामा ९५ जनाले शल्यक्रिया पछि आफ्नो दृष्टिमा सुधार आएको पाउछन्। कुनै पनि शल्यक्रियापछि जटिलताहरु (कम्पलिकेसन) आउने जोखिम हुन्छ भनेर जान्न जरुरि छ। त्यसैले शल्यक्रिया पछि आँखाको कसरी हेरचाह गर्ने भनेर डाक्टरले दिएका निर्देशनहरु राम्रोसंग पालना गर्न जरुरि हुन्छ।
नुब्रि भाषाको दस्तावेज परियोजना
यो शिविर डा. क्याथ्रिन डोनोह्वा (सहायक प्राध्यपक, भाषाशास्त्र विभाग) को नुब्रि भाषाको दस्तावेज बनाउने परियोजनाको समर्थनमा हङकङ विश्वविद्यालयको अनुदान समितिले अनुदान गरेको कोष ‘एचकेह्यिउ नलेज एक्सचेन्ज फन्ड (HKU Knowledge Exchange Fund)’ बाट प्रायोजित छ।
BACK TO नुब्रि उपत्यकामा आँखा शिविर